Hiran State - News: HS:-Ganacsatadii ugu badneyd ee ka soo jeeda qabiilka Hasan Daahir Aweys oo xayiraad lagu soo rogayo hantidooda
HS:-Ganacsatadii ugu badneyd ee ka soo jeeda qabiilka Hasan Daahir Aweys oo xayiraad lagu soo rogayo hantidooda
HS:-Ganacsatada iyo inta badan shirkadaha ay sida gaarka u leeyahiin shaqsiyaad ka soo jeeda beesha Habargidir oo dhawaan xayiraad lagu soo ragayo.
Inkasta aanu magacyada iyo shirkadaha ay beeshaasi leetahay ee dhawaan hawada laga saari doono sidii shirkadii Barakaad qeybaheena danbe ku soo qaadan doono hadane marka xaalada dhinacyo badan laga eego waxaa muuqaneysa dhaqaalahii ay 22 kii sano ee inadhaaftay fowdadii dalka ka sameeyeen beeshaani ayaaa hada waxaa iyagoo awalba xaaraan ahaa marka la eego qaabkii ay gudaha wadanka uga sameeyeen, hadane dowladaha dagaalka xoogan kula jira argagixisada ayaa xalaaleysanayo.
Dabcan ganacsatadan iyo shirkadahan waxaa soo diiwaan galiyey isla shaqsiyaad beeshaasi ka soo jeeda oo sidii Aden Xaji Ceyrow oday Aweys Malaayiin dolar doonaya in ay ka sameeyaan madaxiisa.
Waxeysa su'aal ka taagan tahay dowlada ay doonayaan in ay u doodo si hantidooda loogu bad baadiyo waatee tolow ma dowlada ay iyagoo qabiil ah ugu hanjabeen hadaan Hasan Daahir la soo deyn Mogdishaan gubeynaa mey berito ku calaacali doonaan madaxdeeda?
Qaraxyada ay beeshaani ka wadaan caasimada Soomaaliya ee ay kii ugu danbeeyey xaafada Hodan ka sameeyeen iyo hantida dhawaan laga xayiri doono ma soo afjari doontaa fowdadii iyo shaatiyaashii kala duwanaa ee ay bulshada Soomaaliyeed maalinkasta u soo gashan jireen maadaama ay shaatigii ugu danbeyey ee lagu tuhmi jiray ee argagixisada si rasmi ah u gashadeen.
Wararkii ugu danbeeyeyna waxey sheegayaan in tirada rasmiyan hantidooda la xayirayo ay gaarayaan 20 ganacsatada beeshaasi ah dabcan gudoomiyaha baarlamaanka oo wax badan xog ogaal u ah sida aduunyada looga ciribtirayo hogaamiyaasha xagjirka ah sida oday Aweys oo kale waxuu uga digay rag beeshaas ka soo jeedo in ay arinta Hasan Daahir Aweys siyaasadeeyaan beeshiisa oo arinta qabiil ka dhigaan.
Sida muuqata beeshaani waxey noqon doontaa beshii ugu horeysay ee argagixisada Soomaaliya dhiiragelisa, sidoo kale waxey noqon doontaa beeshii ugu danbeysay ee dowlad iyadoo qabiil ah u hanjabta marka kuwa ay isku haleyneyso ee hantida leh ee dowlada ugu hanjabaya in ay wadanka qalalaaso galinayaan hadaan Hasan Daahir la soo deyn awoodooda dhaqaalaha la wiiqo.
La soco magacyada iyo shirkadaha beeshaan laga xayirayo iyaga qabiil ahaan ayey u hadlayaan laakinse waxeysan ogeyn in aduunyada iyo malaayiin Soomaaliyeed ay sugayaan odayga oo maxkamad la soo taago maadaama uu danbiyo cul culus ka galayumada Soomaaliyeed.
Soomaaliya nabad xoogan ayaa ka soo muuqato cararkii uu Hasan Daahir ka soo cararay Shabaabna wax badan ayuu banaanka keenay in uu odaygu beesha ku ogeyd ay ku taagi jirtay argagixisada caalamka.oday Aweys markasta oo uu idaacad ka hanjabo shaqsi beeshaani ka soo jeeda waxaa dowladaha dagaalka ba'an kula jira argagixisada xoojiyaan dhaq dhaqaaqiisa waxeyna dowladaha reer galbeddka qaarkood ku amreen dowladaha ay ciidamadooda joogaan Soomaaliya hadoo Hasan Daahir messhuu joogo laga saaro in ay Amisom u raacan doonaan taasi oo xaalada sii murjisay in aysan xaalada odaygu caadi aheyn.
Dowladaha qaarkoodna waxeyba sugi la tahiin inta uu ka soo dhamaanayo gacanta dowlada Soomaaliya oo wadan kale laga geeynayo kedibna oday Aweys meeshuu maro wax badan waa leys weydiin.
· admin on July 15 2013 14:53:10 · 0 Comments · 2698 Reads ·
14,612,280 unique visits